नेपाली गीत सङ्गीतको विकासमा विदेशी स्रष्टाहरुको पनि योगदान छ - Mero Mechinagar
गृह अन्तर्वार्ता / विचार / समीक्षानेपाली गीत सङ्गीतको विकासमा विदेशी स्रष्टाहरुको पनि योगदान छ
अन्तर्वार्ता / विचार / समीक्षामनोरन्जनराष्ट्रियसाहित्य / कलास्थानीय समाचार
झापाको मेचीनगर काँकरभिट्टामा माता बिष्णुमाया र पिता देवीप्रसाद निरौलाको तेस्रो सन्तानमध्ये कान्छो सुपुत्रका रुपमा जन्मिएका योगेन्द्र उपाध्याय निरौला एक दशकदेखि नेपाली आधुनिक गीत सङ्गीतमा सकृय भएर लागेका सर्जक हुन् । सङ्गीतमै स्नातकोत्तर गरेका उनले रेडियो नेपाल आधुनिक गायन प्रतियोगितामा गायन र सङ्गीतमा उत्कृष्टता हासिल गरेका छन् । रियालिटी सो ‘नेपाल आईडलका’ प्री जज् को समेत भूमिका निभाइसकेका उनी ‘द भोईस अफ नेपाल’ सिजन वानका कडा प्रतिस्पर्धी थिए । उनले ‘प्रतिभाशाली नव गायक’ को रुपमा इमेज अवार्ड समेत प्राप्त गरेका छन् । दर्जनौ आधुनिक गायन तथा भजन प्रतियोगितामा सम्मानित भएका उनले रेडियो नेपालबाट गायन तथा सङ्गीतमा ‘क’ श्रेणीको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् ।
आज हामी गायक, रचनाकार तथा सङ्गीतकार योगेन्द्र उपाध्याय निरौलासँग मेरो मेचीनगर डट कमले तयार पारेको अन्तर्वाता प्रस्तुत गर्दैछौ ।
सामान्यतया आजभोलि पहिलाको भन्दा व्यस्तता फरक छ । पहिले विभिन्न स्कुलहरुमा सङ्गीतको अध्यापन सँगसगै नयाँ नयाँ गीत सङगीत सृजनामा व्य्स्त हुन्थें भने आजभोलि चाहीं सङ्गीतसँग रिलेटेड विषयहरुको अध्ययन गर्दै सङ्गीत सृजनाका कामहरु गरिरहेको छु ।
अहिलेको लकडाउनले गीत सङ्गीतलाई कतिको प्रभाव पारेको छ ?
लक डाउनले सङ्गीत क्षेत्रलाई पनि असर त पारेकै छ । तर मेरो नजरमा यो क्षेत्रमा चैं नकारात्मक थोरै सकारात्मक धेरै असर भएको जस्तो लाग्छ । किनभने यो समय आँफूलाई अझ निखार्न र आफ्नो बिषय संगसँगै सम्बन्धित बिषयहरुलाई पनि बुझ्नको लागि यो फुर्सद उपयुक्त समय भयो भन्ने मेरो बुझाई छ ।
तपाईंको नयाँ कामहरु के हुँदैछन् ?
नयाँ काममा भर्खरै एउटा ‘कान्छी मोरी ‘ बोलको गीतको अडियो सकेर भिडियो हुँदैछ । जसमा मेरो सङ्गीत, डीपी खनालको रचना र दीपक भुजेलको स्वर रहेको छ । त्यसैगरी अर्को एउटा नयाँ गीत “घिर्लिङ्ग घिर्लिङ्गमा” बोलको गीता धुन भर्ने काम सकाएर अडियोको कामहरु धमाधम हुँदैछन् । त्यस्तै अन्य सङ्गीतकारसँग गीत, भजन, जनचेतानामुलक गीतमा सहकार्य भईरहेको छ ।
अहिलेको नेपाली गीत सङ्गगीतलाई कसरी लिनुभएको छ ?
आजभोलि नेपाली सङ्गीतमा राम्रा नराम्रा दुवै पक्षहरु छन् । सस्तो लोकप्रियाताको लागि खरायोहरू कुदिरहेका छन् । राम्रा सृजना गर्ने कछुवाहरु आफ्नै तालले हिडिरहेका छन् । बिडम्वना प्रायः मिडियाहरु खरायोहरुको पछी दगुरिरहेका छन् ।
संगीतकर्मीहरु प्रविधिसँग कतिको नजिक हुन जरुरी छ ?
राम्रो प्रश्न गर्नु भयो । यो सान्दर्भिक पनि छ । हामी अहिले आधुनिक डिजिटल यूगमा छौं। जुनसुकै क्षेत्रको मान्छे होस्, प्रविधिसँग नजिक हुन जरूरी नै भईसकेकोछ । हेर्नुहोस् रेडियो टिभी पनि पूरानो प्रविधि भईसक्यो आजभोली । फेसबुक, युट्युब जस्ता बिभिन्न अनलाइन मिडियाहरु प्राय सबैको पहुँचमा छ । त्यसैले एउटा गायक/सङ्गीतकार पनि प्रविधिसँग अपडेट छैन भने त्यो पछि पर्ने कुरा लगभग निस्चित नै छ ।
अहिले भाइरल बन्न खोज्नेहरुको भीडलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
खरायो र कछुवाको कथा जस्तै हो । मैले पहिला नै भनिसकें ।अरू भन्दा पनि नेपाली संचार माध्यममा खासगरी युट्युबका धेरैजसो पत्रकार साथीहरु नै गीत सङ्गीतको विषय भित्र हचुवाको भरमा लेख्ने बोल्ने गरेको पाउँछु । कहींकतै एउटा राम्रो गाउने मान्छे भेटियो भने “अर्को नारायण गोपालको जन्म” भनेर लेखिहाल्ने र भाईरल बनाउन तछाडमछाड गरेको देख्नु नै भएको होला । जसलाई नी नारायण गोपाल !!! अशोक दर्जी पनि नारायण गोपाल, जन्तरे मामा पनि नारायण गोपाल !!!पहिला नारायण गोपाल बारेमा अध्ययन गरौं, थाहा पाउँ अनी भनौँ । ठीकै छ, उनीहरु प्रतिभावान होलान् तर नारायण गोपाल नै भनिहाल्नु त भएन नि । यो उदाहरण मात्र हो । यस्ता युट्युबरहरुका कारण पनि सङ्गीतमा लागेका राम्रा स्रस्टालाई खिन्नता महसुस हुन्छ ।
सङ्गीतमा लागेर के पाउनु भो के गुमाउनु भो ?
सबैभन्दा ठुलो कुरो मैले मैले भरपुर आत्मसन्तुष्टि पाएको छु । मेरो आफ्नो रोजाईको बिषय अन्तर्गत रहेर म बाँच्न सकेको छु । यसैबाट धेरै नभएपनी पुग्ने गरी आयआर्जन पनि गरेको छु । सङ्गीतमा नलागेको भए आर्थिक रूपमा अलिक प्रगती गर्थे होला । तर अब त्यो आफ्नो हातमा आउँदै नआएको कुरालाई
कसरी गुमाएको छु भन्नु र हाहाहा …
नेपाली गीत सङ्गीतमा कुन कुन स्रस्टाहरुको महत्वपूर्ण योगदान छ ?
धेरै हुनुहुन्छ । अझ म त भन्छु नेपाली गीत सङ्गीतको विकासमा कतिपय विदेशी स्रष्टाहरुको योगदान पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा रहेको छ । यो प्रश्नको उत्तर त्यती छोटो हुँदैन । त्यसैले समग्रमा भन्नुपर्ने हुन्छ । नाम लिँदा पनि महत्वपूर्ण स्रस्टाहरुको नाम छुट्ने सम्भावना हुने भएकोले समग्रमा धेरै जना हुनुहुन्छ ।
मनिसको जीवनमा सङ्गीत कति आवश्यक छ ?
तपाईं कल्पना गर्नुहोस् त सङ्गीत बिनाको संसार कती निरस, कती कठोर होला । साहित्य, कला र संगीतलाई कुनैपनि देशको भौगोलिक सीमाले बाँध्न सक्दैन तर देशलाई चिनाउने कुरामा सबैभन्दा महत्वपुर्ण स्थानमा यिनीहरु नै हुन्छन् । गीत सङ्गीतले पूरा देश, समूदाय, धर्म, संस्कृतिलाई चिनाएको हुन्छ । मान्छे केबल मनोरन्जन लिन मात्र होइन, जटील बिरामीको औषधोपचार, मेडिटेसनमा, जनचेतना दिन, शासक विरुद्द आवाज बुलन्द गर्न पनि गीत सङ्गीतको भुमिका देखेका छौं हामिले । वास्तवमा यसलाई परिभाषित गर्न पनि गाह्रो छ ।त्यसैले मानव जीवनको अभिन्न अङ्ग जस्तै हो ।
कोरोनाको महामारी यथावत भएपनि सकृय रूपमा आँफूलाई गीत सङ्गीतका सृजनामा बाक्लो उपस्थिति जनाउँदैछु । कर्म गर्दै जाने हो, अघि बढ्ने हो । बाँकी भगवानको हातमा ।
अन्त्यमा तपाईंका स्रोता साथीभाइ र फ्यानहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
मेरा स्रोता, दर्शकलाई नेपाली गीत सङ्गीत सुन्नुहोस् । लोक, पप, आधुनिक, मेटल, र्याप जे सुन्नुहोस् तर गीतले बोलेको अर्थ र भावना बुझ्नुहोस् । समाजमा विकृति, विसंगती फैलाउने खालका गीतसंगीतलाई निषेध गर्नुहोस् र यदी मलाई अझ नजिकबाट बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मेरो आफ्नै,योगेन्द्र उपाध्याय अफिसियल नामक युटुब च्यानल पनि छ । यसबाट मलाई अझ बढी चिन्नुहुनेछ । म आफ्नो जन्मस्थल काँकरभिट्टा छोडेर काठमाण्डौमा छु । मेरा साथीहरु, अग्रजहरु विशेषगरी काँकरभिट्टा माध्यमिक विद्यालयका मेरा गुरु गुरुमाहरु साथीभाइहरुलाई म विशेष सम्झन चाहन्छु र अन्तर्वाता लिई मलाई मेरो बिचार राख्न दिनुभएकोमा मेरो मेचीनगर डट कमलाई विशेष आभार प्रकट गर्दछु ।
अघिल्लो लेखमा‘सिद्धबाबा कृष्णदास’ लाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको अस्वीकार
अर्को लेखमाआज उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन हुँदै